Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ပြည်တွင်းသတင်း > ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် နောက်ပြန်မဆုတ်ရန် ရှမ်းညီလာခံ တိုက်တွန်း
ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် နောက်ပြန်မဆုတ်ရန် ရှမ်းညီလာခံ တိုက်တွန်း	ကွန်းချမ်း	| ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၂၁ နာရီ ၀၄ မိနစ်	စံခလပူရီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ပဋိပက္ခများ လုံးဝ အဆုံးသတ်၍ ရေရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန် အထူးလိုအပ်နေပြီး နောက်ပြန်မဆုတ်သော ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကို ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ညီလာခံက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ကြေညာလိုက်သည်။‘ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ခြင်း ဆွေးနွေးပွဲ’ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပြုလုပ်သော ထိုညီလာခံကို ရန်ကုန်မြို့၊ ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ တော်ဝင်နှင်းဆီခန်းမတွင် နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့မှ စ၍ သုံးရက်တိုင် ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။“ပဋိပက္ခများ ဆက်မဖြစ်စေရန် မဖြစ်မနေ လိုအပ်သည့် အခင်းအကျင်းများကို မိမိတို့ ပါဝင်သည့် အနေအထားမှ အလေးအနက်ထား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန်နှင့် မိမိတို့ အားလုံး စုပေါင်းအားဖြင့် နောက်ပြန်မဆုတ်သော ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်ကို နေရာအလိုက် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်သည့် အခြေအနေများ ရောက်အောင် အချင်းချင်း ပံ့ပိုးမှုများ လုပ်၍ အထူးတွန်းအားပေး ဆောင်ရွက်သွားမည်” ဟု ညီလာခံအပြီး ထုတ်ပြန်သည့် သဘောထားကြေညာချက်တွင် ပါရှိသည်။ညီလာခံသို့ ရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီ ၃ ခု၊ ရှမ်းလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ ၄ ဖွဲ့နှင့် ပြည်တွင်း ပြည်ပ အခြေစိုက် ရှမ်း လူမှုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်း ၁၁ ဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မြို့နယ်ပေါင်း ၄၂ မြို့နယ်မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အထူးဖိတ်ကြားထားသူ ပညာရှင် ၁၇ ဦး အပါအဝင် စုစုပေါင်း ၁၇ဝ ဦး တက်ရောက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ရာတွင် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရေးသည် အဓိကအချက် ဖြစ်၍ ယခုဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပရသည်ဟု ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (SNLD) ဥက္ကဋ္ဌ ခွန်ထွန်းဦး က ပြောသည်။“လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အကြောင်းတရားထဲမှာ တိုင်းရင်းသား ပြဿနာက အဓိက ဖြစ်နေပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား ပြဿနာ ပြေလည်နိုင်ဖို့ ဆိုရင် ဒီနိုင်ငံမှာ စစ်မှန်တဲ့ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ထောင်နိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ထို့အတူ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ဖို့အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး မရှိဘဲ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ တန်းတူမှု မရှိဘဲ ငြိမ်းချမ်းရေး မရှိနိုင်ပါဘူး” ဟု ညီလာခံ အဖွင့်နေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ထို့ပြင် အငြိမ်းစား အင်္ဂလိပ်စာ ပါမောက္ခ ရှယ်လီ နန်းဟွမ်လိတ် ကလည်း “ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်တယ်ဆိုတာငွေကြေးနဲ့ ဝယ်ယူလို့ မရသလို အပေါ်ယံ ဟန်ဆောင်မှုနဲ့လည်း မရပါဘူး။ ရင်ထဲက လာတဲ့ ယုံကြည်မှုကသာလျှင်ရေရှည် တည်တံ့မှာပါ။ တိုတိုပြောရရင် အပြောနဲ့ အလုပ်နဲ့ ညီပါစေ” ဟု ဆွေးနွေးပွဲ အဖွင့်အမှာစကားတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ထို့အပြင် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်၊ လက်ရှိ ရှမ်းနိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ စာပေ ယဉ်ကျေးမှု၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှမ်းလူမျိုးများ နေထိုင်ရာဒေသများတွင် ကောက်ယူရရှိခဲ့သောပြည်သူများ၏ ဆန္ဒသဘောထားနှင့် ရာစုဝက်ကြာ နိုင်ငံရေး ပြဿနာ၏ ဒဏ်ကို ခံစားနေရသည့် ရှမ်းလူမျိုးများ၏ အခြေအနေများ ပါဝင်သည့် စာတမ်း ၂၃ စောင်ကို တင်ပြခဲ့ပြီး တင်ပြချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ခေါင်းစဉ်အလိုက် အုပ်စုခွဲကာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ညီလာခံ ပထမနေ့တွင် ရှမ်းပြည် တိုးတက်ရေးပါတီ (SSPP) နာယက စဝ်ဆေထဝ်၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချူပ် (SNLD) ဥက္ကဋ္ဌ ခွန်ထွန်းဦး၊ ရှမ်း တိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (SNDP)၊ တိုင်းလိုင် (ရှမ်းနီ) အမျိုးသားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ (TNDP)၊ ရှမ်းပြည် ပြန်လည် ထူထောင်ရေးကောင်စီ (RCSS)နှင့် မိုင်းလား အထူးဒေသ ၄ (NDAA-ESS) မှ ကိုယ်စားလှယ်များက အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပြီး တိုင်းရင်းသားများ၏ လိုလားချက် ဖြစ်သည့် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးကို အသားပေး ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ပထမနေ့တွင် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှုအဖွဲ့ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ သမ္မတရုံး ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း၊ ဝန်ကြီး ဦးစိုးသိမ်းနှင့် လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်စိုး တို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။SSPP နာယက ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စဝ်ဆေထင် ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူ့အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားအရေးသည် ထပ်တူထပ်မျှ အရေးကြီးပြီး ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို တိုင်းရင်းသားများ လိုလားသည့် ဖက်ဒရယ် အခြေခံသည့် ဖွဲ့စည်းပုံဖြင့် အစားထိုးရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောသည်။ညီလာခံ၏ ရလဒ်ကို ကျေနပ်ကြောင်းနှင့် ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ရန် ခွန်အားဖြစ်ကြောင်း ခွန်ထွန်းဦး က ပြောသည်။“ရှမ်းပြည်နယ်က အဖွဲ့အစည်းအားလုံး စုစည်းနိုင်တဲ့ အနေအထားကို တွေ့ရတယ်။ ဖြည်းဖြည်းချင်း ဆက်လုပ်သွား ရမှာပေါ့” ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။“အရင်တုန်းက ဒီလိုမျိုး လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဘယ်ပြောလို့ရမလဲ။ အခုက ကောင်းကောင်းမွန်မွန် လုပ်ခွင့်ပေးတယ်။ အနှောင့်အယှက် ဆိုတာလည်း ဘာမှ လုံးဝ လုံးဝ မရှိတော့ဘူး။ ကျနော်တို့ကလည်း ကောင်းစေချင်တဲ့ ဆန္ဒပဲလေ။ ရတာ မရတာ အပထားပေါ့” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။‘ရှမ်းပြည် အတိုင်ပင်ခံ ကောင်စီ’ ဖွဲ့စည်းမှုကြောင့် နိုင်ငံတော် သစ္စာဖောက်ဟု ဆိုကာ ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလက ဦးခွန်ထွန်းဦး အပါအဝင် ခေါင်းဆောင် ကိုးဦးကို ဖမ်းဆီးပြီး ရှစ်ဦးကို ထောင်ဒဏ် နှစ် ၇ဝ ကျော်မှ ၁ဝဝ ကျော်အထိ ချမှတ်ခဲ့သည်။ ထိုအထဲမှ တဦးမှာ ထောင်တွင်းမှာပင် ကွယ်လွန် သွားခဲ့ရသည်။ ရှမ်းပြည် အတိုင်ပင်ခံ ကောင်စီ သည်လည်း အစိုးရ စေခိုင်းမှုကြောင့်သာ လုပ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဦးခွန်ထွန်းဦးက ဆိုသည်။ယခုညီလာခံပြီးနောက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ် အတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု အဖွဲ့အစည်းအားလုံး ပါဝင်သည့် ညီလာခံကြီ်းကိုလည်း ဆက်လက်ကျင်းပသွားရန် အစီအစဉ် ရှိကြောင်းလည်း ခွန်ထွန်းဦး က ပြောသည်။
KNU ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောတာမလာဘော တာဝန်မှ အနားယူဖွယ်ရှိ	ရှမ်းညီလာခံတွင် ဒု-သမ္မတနှင့် ဝန်ကြီးနှစ်ဦးကို ဖိတ်ကြားမည်	အားလုံးပါဝင်သည့် ညီလာခံကြီး ဖော်ဆောင်ရန် ABSDF နှင့် ၈၈ လိုလား	ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ညီလာခံ SNLD စီစဉ်နေ	ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံ ကျင်းပဖို့ KIO ဒု-စစ်ဦးစီးချုပ် ပြော	ပဋိပက္ခ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် စစ်တွေသို့ ရောက်ရှိ	ပါတီတွင်း မကျေလည်မှု တွံ့တေး NLD ဆန္ဒပြ	Who is Online
We have 69 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved